Uyakuthanda ngesondo imidlalo ukhuphele kwaye ukuphela i-usamuel kude
Njengoko enjalo, umdlalo iqala kwi yeziphambili age: rattles, teddy unika, njalo, iimoto, kwaye kwangoko ngesondo amacandelo karhulumente, kwaye ke kwakhona dolls, rags, Sony, yenza-phezulu, kwaye nabanye abantu ke ngesondo amacandelo karhulumente. Mzuzu oyedwa, nokuba ngokwesini, uba ngobukho bakhe sexuality, umdlalo uqalisa ubushushu phezulu, loluntu amaxabiso, yeemvakalelo zakho manipulation, curiosity, imagination, kwaye ubuchule kuba izixhobo kugqatso kuba ngesondo kumnandi, ukususela kufumaneka kwi-imeko ukuze asazanga yakho crush ukuba ufikelelo kwincam yoluvo yesondo nangaliphi na iindleko., Abantu abaninzi liked abo imidlalo kunye kissing, ingakumbi xa kokuba kuqaliswe besela ngenxa yokuba waba rhoqo i-kwesizathu kuba umntu ukuba asazanga nabani na abo babefuna ngexesha elinye ngokuhlwa kwaye ukuba kwaba socially owamkelekileyo. Uninzi njengesiqhelo baba vula wonke umntu, kodwa kwakukho rhoqo abo bantu (emidala idla okkt) abo beza phezulu kunye stories malunga indlu amaqela (apho ngabanye mmangaliso akukho namnye waba kunangaphambili ukuba sele), apho ezo zinto kunokwenzeka ukuba thina kuphela khangela kwi porn okanye ukufumana ukusuka ngesondo imidlalo kwelandelayo.
Nisolko kancinci upset, kodwa ufuna ukuba lapho. Ngaba kwakukho nje fucking komhlaba, kodwa baba nawe zange ukwazi ukuba ibe yinxalenye abo ngakumbi extreme imidlalo. Umhlawumbi ubungayazi zama kuba, kodwa kufuneka baba ngaphezu ethanda uyigcine kwinqanaba quanta. Namhlanje, ilanlekile eminyaka ukususela kuwe baba a teenager, abantwana kuba ukuphucula zabo imidlalo, kwaye ewe, bamele ayisasebenzi i-engaselunxwemeni luhlaza. Kunye ngoko ke kakhulu ulwazi ngexesha labo fingertips, kutheni ingaba ibe okungekuko ukuba evolution ka-ngesondo imidlalo ukhuphele lumisiwe e fat iifoto okanye monogamous ngesondo? Nangona kunjalo, musa ukusebenza ngaphandle iingxaki., Kwaye apha sisebenzisa ukucinga ngokukodwa ka isini nokungalingani. Ngabo ngxi misela phezulu inzuzo i-boys, ngexesha girls ingaba ngokubanzi kulindeleke ukuba yanelisa ngaphandle ilindele ukuze ndonwabe, oko rhoqo (ngochulumanco) uyavuma ukuba.
Ngesondo imidlalo okulandelayo: Stimulate i-imagination
I-Nutaku console ngu alungiselelwe abadala kuphela. Yiyo njani oko ikhangeleka kwaye behaves. I-creators kaloku eli-console njengoko "kuqala kwi-console ye-kuba ngabantu abadala", oko kukuthi, console kunye explicit pornographic isiqulatho - ngesondo imidlalo kwelandelayo. Console ekuthiwa yi emva Nutaku portal, apho specializes kwi-porn/hentai imidlalo, awathi kanjalo console u-dala isiqulathi-zifayili., Nangona i-console lunika ngokwalo njengoko ukuba kube kuba ngabantu abadala, honestly, asingawo ngokuqinisekileyo abo (average) ingaba ufuna ukuba ingaba oku endlwini, ingakumbi xa ubona ntoni ngayo kuyafana na, kwaye kubonakala ngathi abanye silicone cake kwi-imilo ka-enkulu umfazi ke breast. Uninzi bizarre bonke, kwi / ngaphandle tshintsha ingaba nipple ngokwayo (oko kukuthi encinane ukudlala kwi English amazwi - isijamani / ngaphandle - zidibene kunye nipple njengoko i-erogenous eselunxwemeni).
Nangeyiphina indlela, kwi-Intanethi, ubona njani yonke inkqubo ukwenza oku bizarre console ngu ndihamba, kwaye ukuba yi na ithuba kuwe ukuze oko, ubuncinane, masithi nathi siyazi ngoko ke sinako kovavanyo-console. Endleleni, ukuba sidibanisa ukuba lokuqala uphawu (akuvumelekanga wathi zingaphi amaqhekeza aye) waba snatched ukusuka kule ndawo kwaye ukuba ixabiso console ufumana i-high khawucinge nge-hardware kwaye imidlalo ye "ngesondo imidlalo yandisa" - kangangoko 170 dollazi? Enyanisweni, abo uyabathanda, ayisayi kuba kakhulu kakhulu. Console lwenziwa ngokupheleleyo ngesandla, kwaye plastic imimandla ashicilelwe kwi khetha 3D abashicileli., I-silicone ngu apeyintwa kwi-ezimbini ezahlukeneyo imibala, kwaye kukho esezantsi zamalungiselelo kwi meko, kuquka HDMI.
Imidlalo yevidiyo kwaye ngesondo ingaba ngcono e relieving usamuel kunokuba nantoni na
Ngokunxulumene uphando, apho obandakanyekayo voluntarily surveyed abahlali diverse ubudala, isini, iklasi, kwaye yenkcubeko isakhiwo, kuyo intliziyo phandle ukuba abantu bayakuthanda ukudlala imidlalo yevidiyo njengoko indlela relax kwaye ukuphumla emva nzima imini emsebenzini okanye ekholejini. Abaphenduli kokuba ilungelo khetha ngakumbi izinto kwaye udidi kwabo ngokunxulumene dibanisa ukusebenza ngayo iye kwi kwabo. Yi-kude kakhulu kubo, 74% ka-abaphenduli, kugqitywe ukuba bathethe kwaye beka phantsi ngaphandle kunye nabahlobo bakho ukuba uphumle, kwaye relax, ngexesha yesibini ndawo waba ukudlala imidlalo yevidiyo, apho wesithathu ka-abaphenduli njengoko kukhankanywe a uhlobo kuphumla kwi uluhlu lwabo., Simele kanjalo qaphela ukuba abantu abaninzi apha ekhethiweyo ngesondo imidlalo ukhuphele njengoko zabo ncwadi uhlobo gaming fun. Kunyaka wesithathu ndawo zenza indulging elungileyo ukutya, esibizwa kukhankanywe nge-29% ka-abaphenduli. Kwi-umahluko, ngesondo imisebenzi okanye ubukele pornography, kwi-4th ndawo, kuphela ezinye 27% yomvuzo abaphenduli ubeke olu hlobo relaxation kwi uluhlu lwabo.
Uphando ke jikelele elokugqibela kukuba abantu abo yithi rhoqo sebenzisa ukudlala imidlalo yevidiyo njengoko a ifomu relaxation nokufumana kakhulu lula ukusuka usamuel emsebenzini kwaye azise iingxaki zabo ukusuka umsebenzi ekhaya kwaye usekela kamongameli kwelinye icala ngaphantsi. Enkulu share kanjalo kwi-iintlobo imidlalo kulo mbuzo. Uphando sicinezela ukuba abadlali zezona zingcono influenced yi-kanye-umdlali imidlalo, ngokukodwa lokuqala-umntu shooters (FPS), ngesondo imidlalo kopa, kwaye inyathelo adventures. Kwi-umahluko, multiplayer imidlalo kwaye abo ngokubanzi kwenza usamuel kwi-ngokwabo kuba opposite ukusebenza olulolunye worsen abaphenduli' mental state.
Yimalini kuba imizobo ka-imidlalo yevidiyo itshintshe kwi-10 ezayo?
Ngonaphakade ukusukela zabo inkangeleko, imidlalo yevidiyo kuba uxakekile wonke umntu, ikakhulu i-young. I-modernization ka-imidlalo yevidiyo sele kukhokelele incredible umlinganiselo ulungiso kunye kokuhluma ka-onesiphumo inyaniso. Namhlanje sifumane ithuba ingqina genuine umlinganiselo namathuba. Oludlulileyo amaxwebhu, imidlalo yevidiyo, kwaye onesiphumo inyaniso iinkqubo kufuneka ufikelele zabo umgama wenkcochoyi, kwaye obu bugcisa uqhubekeka evolve mini emini kunye incredible isantya. I-imizobo kuba ephambili ngoko ke kakhulu ukuba imidlalo elishumi ngaphandle andinaku kuthelekiswa., Sino umzekelo ukuba uza ngokucacileyo kubonisa ntoni thina oman: DreamSexWorld yi 3d porn umdlalo ukuba ezimbalwa imidlalo kwiindawo zentengiso unako komlinganiselo kuyo kwaye abaninzi share efanayo notion. Kule vidiyo umdlalo ke, imizobo abanaye a ukuthandabuza eyona nto uyakwazi ukubeka amehlo enu kwi, kwaye siza kuthetha nantoni na evela sexy Lara Croft ukuba abasebenzi ukususela OverWatch abakhoyo kunokuba eager ukuba bang ekunene kwi-phambili ikhamera.